Dhismaha Safaaradda Soomaalida ee Roma oo Shirkad Talyaani ah laga kireeyey muddo 18-sano ah | Anti-Tribalism
← Warqad Furan oo kusocota Xukuumadda Soomaaliya
Wargeys kasoo baxa Talyaaniga oo Nuur Cadde la meel dhigay Jilaagii weynaa ee Talyaaniga Toto (Maxey tahay sababta.?) →
Nuur Cadde, safiirka DFS u fadhiya Roma ayaa qiran in safaaradii Soomaalida laga kireeyey dad Talyaani ah. Dhismaha daartaasi waxaa mulkiyadeeda leh qaranka Soomaaliyeed, waxaase hadda lagu wareejiyey shirkad shisheeye oo muddo 18-sano ah deganaan doonta. Arrintaas warbixinteeda ka aqri qormada hoose oo ay isku soo dubaridey Muna Abshir Abdi.
Maanta qoraalkaaygu waxuu ku wajahan yahay qoraalo iyaamahaan saxaafada calamka iyo tan soomaaliduba isla dhex marayeen oo ku saabsan Safaarada aay Soomaaliya ku leedahay dalka Talyaaniga gaar ahaayna magaalada Roma. Safaarada Soomaaliya aay ku leedahay dalka Talyaaniga waxaay ka mid tahay Hantida dad waaynaha Soomaaliyeed oo dowladiihii dalkeena ka jiray intaan burburku dhicin aay qaranka dalka u iibiyeen.
Hadaba burburkii ka dib waxaaa durbadiiba bilaawday bililiqo baahsan , dhac, nin waxuusan lahaayn sheeganaya iyo iibsashada hantida dad waaynaha soomaaliyeed. Qof kasta waxuu rabaa in uu maalin ku taajiro, qof kasta waxuu rabaa in uu tittle (Dr, Professor, Sheikh IWM) been ah oo uusan lahaayn sheegto.
Dhismaha Safaaradda Soomaalida ee Roma oo Shirkad Talyaani ah laga kireeyay muddo 18 – sano ah
Ma aha markii u horeeysey oo rag sheegta masuul aay iibsadeen ama iska maamushaan Hanti ka dhaxaaysa Umada Soomaaliyeed. Shalay bay ahaayd markii Nuur Cade iyo contact Group wada saxiixdeen heshiiskii bada ee loogu magac daray burcad badeed la dagaalanka halkaas oo ciidamo badan oo aduunka ka kala socdaa aay si sharci daro ah ku galeen Biyaha dalka Soomaaliya
Shaqsiyaaad kale oo anaan hada meeshaan uga hadlaan ayaa iyana bada Soomaaliya in sun lagu shubo u saxiixay shirkado ajaanib leeyahay. Kuwa kalana waxaayba isku dayeen in aay bada qaayb ka mid ah ka iibiyaan wadamada dariska aan la nahay mid ka mid ah.
Hadaba aqristoow inagoo wada ogsoon in Hantidii qaranka Soomaaliyeed meel kasta la beecinayo, qaarna horay loo beec geeyey oo shaqsiyaad Soomaali sheeganaya iibsadeen, marna ma is waaydiisey goorta Soomaaliya oo dhan la iibinayo? Waayo hadii badii la iibiyo, birigii waxiii yaalayna la iibiyo, dibadii hantidii aan ku lahaayna la iibiyo, maxaa soo haraya oo la sugayaa?
Safaarada Soomaaliya ee dalka talyaaniga ku taal waxaay waayadaan danbe u ahaayd hooy qaxoonti soomaaliyeed oo gaaraya ilaa 200-oo qof kuwaas oo dalka talyaanugu u diidey sharci. Nuur Cade 4- sano ayuu safaarada gees kaga shaqaaysanayeey, dhinaciisa waxuu ka dhigtay mutuleel, kursi leader ahna wuu soo dhigtay oo uu isku war wareejiyo sidii Nin boqor ah.
Dhinaca kale ee qaxoontiga Soomaalidu kaga sugnaayeen Safaarada waxaa ka muuqdey dayac baahsan oo qof indhihiisa ku arka mooyaane aan qoraal lagu sharixi Karin. Musqul ma lahaayn, biyo malahaayn, koronto ma lahaayn. Dadku waxaay wax ku karsanayeen gasacado ama koonbooyin sida dadka qaar u yaqanaan. Cajiib Safiir dhan oo safaarad noocaan oo kale dhinac kaga nool, dadkii uu masuulka ka ahaayna noloshaan kaga nool yihiin guriga uu ka haawl galo dhiniciisa kale. Xataa ma awoodi waayey in uu shoolad ama cooker aay wax ku karsadaan u gado?Halkaan ka fiirso Film document ah oo Safaarada Soomaaliya ee Dalka Talyaaniga uu ka sameeyey Nin U dhashey dalkaasi Talyaaniga 2012..
Posted on December 3, 2012, in Anti-Tribalism. Bookmark the permalink.	Leave a comment.